China Calcium Silicate Board / Fiber Cement Board Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | Amulite
Miaraka amin'ny vokatra vita amin'ny simenitra vita amin'ny fibre, amin'ny alàlan'ny indostrian'ny fananganana sy ny haingon-trano, ny teknolojia famokarana fantsom-pamokarana simenitra ary ny ambaratonga mandeha ho azy dia manatsara hatrany hatrany ny fotoana rehetra. Miaraka amin'ny ezaka mitohy ataon'ny ekipa injeniera amulite dia mitazona hatrany ny fanavaozana ny teknolojia izahay ary manao ireo milina fanaovana simenitra fibre ho ln Ambaratonga avo kokoa amin'ny tsenan'ny vokatra eto an-tany simenitra; Ankehitriny manana fanamboarana tsy tapaka sy famatsiana birao simenitra simenitra / fantsom-pamokarana silikonika vita amin'ny sotasota amin'ny alàlan'ny fahafahan'ny 3Million Sq.m isan-taona. 4Million Sq.m isan-taona. 6Million Sq.m isan-taona, 8Million Sq.m isan-taona, 10Million Sq.m isan-taona tsy tapaka; Birao fenon'ny haben'ny 2440X1220X (4-25) MM sy 3000X1220X (4-25) MM, azontsika atao koa ny manamboatra ny fitaovana fanamboarana araky ny mpanjifa. 'Ny takiana, ny famaritana namboarina rehetra dia azo tanterahina;
Karazana sy endri-javatra
Ny birao fanamafisana kalsioma vita amin'ny fibre dia miantso ihany koa ho toy ny birao CSB / FCB. Ho karazana fananganana fiarovana sy tontolo iainana vaovao, izay misy tombony amin'ny lanja maivana. Tanjaka avo, tsy misy afo, fampisehoana insulated hafanana tsara. Fampiasana betsaka sy mandritra ny androm-piainana sns. Ankehitriny, ny vokatra avy amin'ny birao famolavolana sifotra sy fantsona simenitra dia ampiasaina betsaka amin'ny fananganana valindrihana sy fizarazaran-trano.Fananganana ivelany ivelany, tranobe ho an'ny daholobe fanamafisam-peo, taila valin-drihana, fantson-drivotra.
Ny Birao Silicate Silicate / Fiber Cement Board dia mandray fibres anorganika na fibre cellulose ho fitaovana fanamafisana ny fibre. Raiso ny fitaovana kalsioma sy silicate ho fitaovana fanamafisam-peo lehibe indrindra. Amin'ny alàlan'ny famokarana Slurry Mixing, Board Forming. Board Stacker, Pre-Curing, Demold Template, Autolave ​​Curing To Mampiasà, ho an'ny takian'ny birao avo lenta kokoa. Afaka manampy birao fanaovan-gazety, fanamainam-birao, fampiroboroboana ny birao ary hanodinana ny sisin-tany, ary hanao sary hoso-doko hanatsarana ny fenitra sy ny fampiasana ny birao, avy eo dia afaka mampitombo bebe kokoa momba ny lanja ampiasana ny birao ary hampitombo ny tsenan'ny fivarotana birao ; Ho an'ny fizotran'ny birao fandrafetana ny sotasota Silicate Silicate / Ny famokarana birao simenitra amin'ny fibre dia matetika no mitondra karazana slurry forme, Hatchek Forming Type ary Extrusion Type.
Fibre nohamafisina (Kraft Paper Pulp, Wollastonite, Glass Fiber.Mica Etc), Silicate Materials (Quartz Sand, Fly Ash, Diatomite Etc}, Calcium Materials (Lime Powder, Cement), Additives Etc
1.Fitrandrahana tanky sy tankin'ny rano
Misy fantson-drano iray madio ary tankina iray misy fotaka iray; ny vatan'ny rano samy hafa dia nohamafisin'ny vy karbonika, ny fantson-drano maloto dia ampiasaina hanangonana ny rano azo alaina avy amin'ny fizotran'ny famokarana takelaka, alaina ny rano maloto mba hampifangaroana amin'ny fivoaran'ny rano, ho madio Ny fantson-drano dia entina maka rano madio hanadinana ara-nofo sy tranokala mahazatra.
2.Poll Pulp Process
Taratasy fanodinana taratasy dia misy milina mpanimba taratasy, mpanadio, ary tanky fitahirizana taratasy
Ny mpitrandraka taratasy dia ampiasaina hanaparitahana ireo taratasy Kraft
Mpanadio ampiasaina hikirakira ny poleta vita amin'ny taratasy mba hikororohana sy hipaoka azy ireo amin'ny fitoeran-tsolika fitahirizana taratasy.
Taratasy fitehirizana taratasy vita amin'ny taratasy dia ampiasaina hitehirizana ny taratasy.
3. Fomba fizahan-drano tsy misy rano ao anaty rano maloto
Afaka misafidy ny rafi-pandrafetana slurry miorina amin'ny takelaka na ny karazana Hatschek izay mamorona rafitra takelaka hamoronana takelaka, azontsika atao ny manamboatra azy araka ny takian'ny mpanjifa.
Mikorisa tsara amin'ny rano mikorisa anaty boaty slurry, avy eo amin'ny boaty slurry dia mampita hatrany amin'ny fihazakazahana mba hamoronana sosona slurry, miaraka amin'ny tsy fahampian-drano sy ny rojom-baravarana an-tratra mba hamoronana ravin-takelaka, aorian'ny fametahana ireo takelaka miolaka boribory Drum Roller, avy eo miaraka amin'ny fanapahana mandeha ho azy Takelaka lena mando fisaka.
Mpisaraka rano-rano: ampiasaina hampisarahana ny fifangaroan'ny rano etona nalaina avy tao anaty boaty fanatobiana vata, hidina mankamin'ny fanangonana tsara, ary averina averina amin'ny paompy vava ny rivotra.
4.Flow-On Slurry Sheet mamorona lamina
Aorian'ny famolavolana takelaka fanodinana Roller, avy eo miaraka amin'ny fametrahana laser sy fanapahana mandeha ho azy, ny PC manontolo amin'ny takelaka lena dia miditra amin'ny fizotrany.
5. Rafitra fanapahana rano amin'ny tsindry avo
Ity rafitra fanapahana rano avo lenta ity dia fitaovana ampiasaintsika manokana, miaraka amina paompy faneriterena avo lenta mba hanamboarana rano faneriterena avo hanamboarana fanodinana lambam-panaka amin'ny mpanondrana.
6.Forming Sheet Wet and Sheet Sheet Conveying Process
Ity dingana ity dia ampiasaina mba hampitana ireo takelaka mando tsara avy amin'ny famolavolana Roller, ampitao ireo takelaka mando amin'ny toerany ary hanaovana fanapahana mandeha ho azy.
7. Stacker mandeha ho azy
Takelaka roa azo fehezina indray mandeha. Ny Suction Cup dia mitroka ireo takelaka lena avy amin'ny fandraisana ny masinina mpanera sy ny modely eo amin'ny trolley amin'ny toerana miasa hafa, ary avy eo mametaka azy ireo amin'ny trolley amin'ny toerana afovoany (miaraka amin'ny fanamafisam-peo fanamafisam-po). Ny hetsika marina an'ny amboara suction dia tsapa amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana eo am-pelatanana izay atosiky ny tsorakazo mitaingina Hydraulika.
Fanaraha-maso PLC, fiasa mandeha ho azy.
Function: ny automatique stacker dia ampiasaina hanadiovana sy hametahana ny vokatra avo lenta sy ambany noho ny birao simenitra vita amin'ny fibre / biraon'ny sifotra calcium.
Ny vokatra dia mifatotra milamina sy mandeha ho azy, izay hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
8. Masinina fanindriana
Ny milina fanaovan-gazety dia ampiasaina hampitomboana ny hakitroky sy ny tanjaky ny vokatra,
Fanerena mahazatra: 7000ton, Latabatra fanaovana gazety: 1350 * 2700 / 3200mm, elanelam-potoana: 1200mm, kapoka miasa: 400mm, hafainganam-pandeha: 0,05 ~ 0.25mm / s;
Hafainganana miverina: 15 mm / S
Ao anaty fiara fitaterana an-gazety: singa iray.
Fahazoana alalana: 20T
Làlan'ny latabatra eo afovoan'ny lalamby: 750mm
Modely mihena: fa67-60-y-1.5, I = 50
Hafainganana amin'ny haingam-pandeha: 1380r / min, Hery: 1.5kw
Haingam-pandeha amin'ny dia lavitra: 9m / min
10. Masinina Modely Demoulding Vacuum
Ny hetsiky ny fiara sy ny fiakarany ary ny fianjeran'ny kapoaka suction dia fehezin'ny Servo Motor.
Ny masinina Demoulding Template dia mampisaraka ny modely sy ny takelaka amin'ny trolley, ny modely dia apetraka amin'ny milina borosy solika hamafazana menaka, ary ny takelaka dia apetaka amin'ny sisin-trolley hafa. Manampia Autoclave Interleave Spacer isaky ny takelaka 150 mm.
Ny hetsika marina an'ny amboara suction dia tsapa amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana eo am-pelatanana mihetsiketsika atosiky ny tsorakazo Pneumatika.
Noho ny toetran'ny Fiber Cement Board / Calcium Silicate Board, ny savony sy ny quartz fasika dia ampiasaina ho fitaovana lehibe indrindra amin'ny fizotry ny famokarana, izay mila mahazo ny fihetsika simika eo ambanin'ny maripana ambony sy ny tontolo iainan'ny fanerena avo kokoa, afaka mamela ny akora rehetra mifangaro Ampy izay, ary ataovy henjana sy tanjaka tsara kokoa ireo takelaka.
Ao amin'ny dingam-pamokarana ny birao simenitra fibre / ny fantsom-pandrefesana kalsioma, ny autoclave sy ny fanamainana no ampiasaina amin'ny fanodinana, ary
Ny angovo hafanan'ny Autoclave sy ny fanamainana dia omen'ny boiler!
Ampiasaina ho an'ny birao simenitra vita amin'ny fibre / Calcium Silicate Board, aorian'ny fanasitranana Autoclave, ny votoatin'ny hamandoan'ny birao simenitra fibre dia manodidina ny 25%. Alohan'ny sanding, Edging And Chamfering, ny hamandoana
Tokony hahena ny atiny hidina hatrany amin'ny 15% amin'ny fanamainana. Ny fanamainana dia manana ny tombony azo avy amin'ny famokarana avo lenta, fisehoana tsara tarehy, fikojakojana mora sy fiasa mora.
14. Rafitra fanalefahana fanalefahana
Ny milina fanapahana sisiny dia voaforon'ny takelaka mamelatra latabatra mihodina, latabatra fametahana sisin-tany, latabatra familiana, milina fanetezana ny sisin-tany, latabatra famoahana hetra, kabinetra elektrika, kabinetran'ny rivotra, sns.
Masinina fanetezana fanapahana no ampiasaina hanamboarana sy hanamboarana ny biriky simenitra vita amin'ny fibre, avy eo hametrahana vokatra ho vita.
Teo aloha: EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line
Manaraka: Amulite CO2 XPS Tsipika famokarana sombin-javatra
Masinina amin'ny sotasota Silicate
Milina fanaovana birao vita amin'ny silikotika
Milina famokarana sifotra silika
Masinina vita amin'ny simenitra vita amin'ny simenitra
Tsipika famokarana solika vita amin'ny calcium
Hatschek Progress Calcium Silicate Board fitaovana